नयाँ महामारी आउन सक्ने शंका गरिएको के हो ‘लङ को-भि’ड’? कसलाई छ कति ख’तरा ?कपाल झ’र्ने जस्ता लक्षण.. – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारनयाँ महामारी आउन सक्ने शंका गरिएको के हो ‘लङ को-भि’ड’? कसलाई छ कति ख’तरा ?कपाल झ’र्ने जस्ता लक्षण..
नयाँ महामारी आउन सक्ने शंका गरिएको के हो ‘लङ को-भि’ड’? कसलाई छ कति ख’तरा ?कपाल झ’र्ने जस्ता लक्षण..
करिब डेढ वर्ष को’रोना महामारीसँग जुधेपछि गएको अगस्ट र सेप्टेम्बर महिना विश्वकै लागि राहतको समय भयो। यी दुई महिना को’रोना संक्रमण र मृत्युको तथ्यांक मात्र कम भएन कि विश्वको कुनै कुनाबाट कुनै नयाँ भेरिएन्ट पत्ता लागेको खबरसमेत आएन।